WunZinMin Raja ဝန်ဇင်း မင်းရာဇာ: January 2015
အမျိုးမျိုး သတ်လျှို ပုံဖျက် ကောက်ကျစ်ယုတ်မာတဲ့နည်းနဲ့
ခွေးသူတောင်းစားတစ်စုကတော့ ပြည်သူ့အသက်ကိုနင်းပြီး အခုချိန်ထိဆူလို့ဖြိုးလို့ပေါ့။
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 11:32 PM No comments:
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 4:14 PM No comments:
Credit နန်းလောင် ခမ်းနွံ့ 
(မူရင်းစာရေး သူ့အာဘော် သာ ဖြစ်ါပါသည်။)
ဂျပန်ခေတ် သီပေါစော်ဘွား စပ်အိုနှင့် မဟာဒေဝီ စပ်စိန်လွှာ တို့မှ အငယ်ဆုံးသား စပ်ကြာဆိုင်ကို ၁၉၂၄ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လတွင် သီပေါမြို့၌ ဖွားမြင်ခဲ့သည် ။
၁၉၄၁ခုနှစ်တွင် တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းစော်ဘွားများ၏ မြေး ၊သားသမီးများ ကျောင်းမှ ၁၀တန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။၎င်းမှအိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ဒါလီလင်မြို့ စိန်ပေါလ် ကျောင်း၌ ပညာဆက်လက်ဆည်းပူး သင်ကြားခဲ့သည်။ စီနီယာကင်းဘရစ်ခ်ျအောင်မြင်ခဲ့သည် ။၁၉၄၇ ခုနစ်ဖေဖော်ဝါရီ လတွင်
အသက်၂၃နစ် သာရှိသေးသော်လည်း သီပေါနယ် လူထုတို့၏ တင်မြှောက်ချက်အရ သီပေါစော်ဘွား အဖြစ်လက်ခံခဲ့ရသည်။
သို့ရာတွင် ဘိသိတ်မခံယူသေးဘဲ ၁၉၄၉ခုနှစ် ကိုလိုရာဒိုပြည်နယ် ဒင်ဗာမြို့ရှိ အင်ဂျင်နီယာ သိပ္ပံကျောင်းသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့သည် စော်ဘွားအလောင်းအလျှာအဖြစ်လူမသိခံဘဲ
သာမန်တောင်သူလုပ်ကိုင်စားသောက်သောမုဆိုးမတစ်ဦးသားအဖြစ်နှင့်သာသူ့ကိုယ်သူနှိမ့်ချ ပြောဆိုမိတ်ဆက်ရာမှ အင်ဂျီအဲဗားဟတ် ( နောင်မဟာဒေဝီ စပ်သုစန္ဒီ ) နှင့်မေတ္တာမျှခဲ့ကြသည်။ စပ်ကြာဆိုင်၏ အဓိက ရည်မန်းချက်မှာ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်မှ သဘာဝသယံဇာတ များကို ကြိုးစားရှာဖွေမည်။
ရှမ်းပြည်နယ်၏ များပြားလှသော သဘာဝသံယာဇာတပစ္စည်းများသည် မိမိမိသားစုအတွက်သာ ခံစားဖို့ မဟုတ်၊ ဒေသခံလူထုအတွက်အဓိက ရည်မှန်းခဲ့သည်။ ရှမ်းလူထုအတွင်း အရိုးစွဲနေသော
၃၆ ကောင်ထီ လေးကောင်ဂျင် ။
အစဉ်အလာအရစော်ဘွားများအားဆစသည့်လောင်းကစားဝိုင်းကိုတဖြေးဖြေးပပျောက်စေလိုသည်က်သရသော လယ်ခွန်ယာခွန်များ လျော့ချပြီး တဖြေးဖြေး ရပ်ဆဲမည်။ တောင်သူများ၏စိုက်ပျိုးရေးလိုအပ်ချက်များကိုကူညီမည်။ ထို့ကြောင့်သူ၏ရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ပါရမီဖြည့်ဖက် ဇနီးကောင်းတစ်ဦးကို
အသေအချာ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘွဲ့ယူလက်ထပ်ပြီး ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းရောက်မှ သီပေါနယ်သားများ၏ ခန်းနားစွာကြိုဆိုကြမှုကြောင့်သာစပ်ကြာဆိုင်အားသီပေါစော်ဘွားလေး
အဖြစ် အင်ဂျီ သိခွင့်ရခဲ့သည်။ အများပြည်သူက ဇနီးကို လက်ခံသဘောတူချက်ရပြီးမှသာ
၁၉၅၆ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၂ရက်နေ့တွင်တော်ဝင်မျိုးနွယ်မဟာဒေဝီသီရိမင်္ဂလာစပ်သုစန္ဒီဘွဲ့ကို အပ်နှင်းခဲ့သည်။ သီပေါလူထု၏ ချစ်ခင်မှုရရှိသော မဟာဒေဝီ စပ်သုစန္ဒီသည် တိုင်းတပါး သူဖြစ်သော်ငြားလည်း သူ့ခင်ပွန်း သီပေါစော်ဘွားနှင့်အတူ သီပေါနယ်သူနယ်သားတို့၏ ဘဝဖွံ့ဖြိုးရးအတွက် (စိုက်ပျိုးရေး ပညာရေးအစရှိသည်ဖြင့်) စိတ်ရောကိုယ်ပါ နစ်မြုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။နောက်ဆုံးလူထု၏ ချစ်စနိုးဖြင့် ♡စပ်မယ်♡ဟု သူမအားအမြတ်တနိုး ခေါ်ဝေါ်သည်အထိ လူထု၏ချစ်ခင်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ လူထုများ၏ရင်ဖွင့်သံမှာ စော်ဘွားလေး စပ်ကြာဆိုင်သည်ထိုင်းဘုရင်ဘူမိဘောလိုဘဲ အလုပ်ကိုကြိုးစားတယ် ။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်တယ် ။မိမိကိုယ်ကျိုးထက် လူထုရဲ့ အကျိုးကို ဦးစားပေးစောင့်ရှောက်တယ် အသက်ငယ်သော်ငြားလည်း ပြည်သူကို ရင်အုပ်မကွာ စောင့်ရှောက်တယ်။အဲ့ဒီတုံးကဆို ကျုပ်တို့နယ်သူနယ်သားများက
အကောင်းစားဆန်ကိုမှ စားရတယ် ။ အခုများတော့ ( နေဝင်းခေတ် ) စီမံကိန်းသီးနှံဆိုပြီး အစိုးရကအတင်းအကြပ် စိုက်ခိုင်းနေတာနဲ့ အခုတော့ အညာက တင်ပို့ခဲ့တဲ့ ဆန်ဖျင်းဆန်ညံ့ကိုဘဲ စားရတော့တယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂ရက်နေ့တွင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ဦးဆောင်သော စစ်အာဏာသိမ်း အဖွဲ့ က အာဏာသိမ်းယူလိုက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအားထုတ် ကြိုးပမ်းခဲ့၍ ပါလီမန်အစိုးရ အဆက်အဆက် ကျင့်သုံးလာခဲ့သောဖယ်ဒရယ်စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
ထိုအချိန်မှ စ၍ ရှမ်း ၊ကရင် ၊ ကချင် ၊ကယား၊ချင်း ပလောင် စသည်ဖြင့် တိုင်းရင်းသားတို့ အတွက် အထူးတလည်ပေးထားသောနိုင်ငံရေး အခွင့်အရေး (သို့ ) အဆင့်အတန်း အားလုံးရုပ်သိမ်းဖျက်စီးခံခဲ့
ရသည်မှာ ယနေ့ထက်တိုင်ဖြစ်သည်။ သမိုင်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံး မြန်မာပြည် အစွန်အဖျား တောင်တန်းဒေသနေ တိုင်းရင်းသားအများစုကမူ မြန်မာတို့ကို မည့်အခါမျှ ယုံကြည် ချစ်ခင် လေးစား၍မရနိုင်သည့်အပြင် အဓိကရန်သူအဖြစ် မြန်မာတို့အပေါ် သတ်မှတ်လာခဲ့သည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်မတ်လ၂ရက်နေ့တွင်အာဏာသိမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကိုဖမ်းဆီးခဲ့သည်။၎င်း ဖမ်းဆီးမှုတွင် သမ္မတစပ်ရွှေသိုက်လည်း ပါဝင်ပြီး
၁၇နှစ်မျှသာရှိသေးသော စပ်ရွှေသိုက်၏သားကို အာဏာသိမ်းအဖွဲ့၏ အဆိုအရပြန် လည်ခုခံသည် ဟုဆိုသဖြင့်သူ၏နေအိမ် မှာပင်အာဏာသိမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့၏လက်ချက်ဖြင့်သေဆုံးခဲ့ရသည်။
သမ္မတကြီးစပ်ရွှေသိုက်သည်လည်း ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီး ၈လအကြာမှာခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ အကျဉ်းတိုက်ထဲမှာရေတိမ်နစ်ခဲ့ရသည်။
သီပေါစော်ဘွားလေးစပ်ကြာဆိုင်သည်လည်း ပါလီမန်အစည်းအဝေးတက်ပြီးအပြန်အာဏာမသိမ်းမီ တစ်ရက်အလိုတွင်တောင်ကြီး _ ဟဲဟိုး လေဆိပ်လမ်းမတစ်နေရာတွင်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားရာ
ဤသည်ကား စော်ဘွားလေးစပ်ကြာဆိုင်အား နောက်ဆုံး မြင်တွေ့လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
♡ Credit ♡ နိုင်ဦးမှ ♡တခါတရံက •••••• မဟာဒေဝီ စပ်သုစန္ဒီ •• ♡
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 3:35 PM No comments:
ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေး နှင့် အချုပ်အခြာ အာဏာတည်တန့်ခိုင်မြဲရေး။
ကျွန်တော် တို့အ နေ နှင့် ရှေ့အနာဂတ် ကို နှစ် ပေါင်း တရာ က နေ လေး ငါး ရာ နှစ်ပေါင်း တ ထောင် လောက် ထိ ကို မျှော် မြင် တွေးထင် (vision) နိုင် ရ ပါ မည်။ အဲ့ ဒီလိုတွေးမြင်ပြီး အမြင် မှန် ကို အ ကောင် အထည် ဖော်နိုင် စွမ်း ရှိ ရ ပါ မည်။ အဲ့ ဒီ အပြု အမူ ကို
ဦး ဆောင် ဦးရွက် ပြု ခြင်း တိုတို ရေး ရ မယ်ဆို ရင် ခေါင်းဆောင် မှု (leadership ) ဟု ခေါ်ဆို ကြ ပါ သည်။လွန် ခဲ့ သော နှစ် ပေါင်း သုံး ထောင် ခန့်တကယ် ဆို နှစ် ပေါင်း ၂၈၅၀ ကျော် က အ ဘိရာ ဇာ တည် ထောင် ခဲ့ တဲ့ တ ကောင်းက စ တဲ့ ဗြမာ ။ ဗရမာ ဗမာ ပြည် ကို နှစ် နှစ်ဆယ် အတွင်း တိုင်း တပါးသား များ လက်ကို ရောက် စေ မဲ့ လုံ့လ ပြု မှု မျိုး ကို မလုပ် သင့် ဘူး လို့ထင် မြင် ယူ ဆ ပါသည်။ လူကြီးမင်း များ နှင့် အမျိုးကောင်းသမီး များ ဝေဖန် ကြပါ။ အထူး သဖြင့် အချုပ်အခြာ အာ ဏာ ကို တည် တန့်ခိုင် မြဲ အောင်တာ ဝန်ယူကြ မည့် သူ များ တာဝန် ရှိ သည့် လူကြီးမင်းများ စဉ်းစားသုံးသပ် ကြ ပါ။ ပညာရှိ သတိ ဖြစ် ခဲမို့လေး စား စွာ ပန် ကြား ရ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 3:10 PM No comments:
ကုလား ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ ကို မသိသူများ က သမိုင်း ကို မလေ့လာ သူများဖြစ်ပါ တယ်။
ကုလားဆို တာ အမျိုးကောင်းသား (Noble Son) လို့အဓိပ်ပါယ် ရ ပါတယ်။
ဂေါတမ ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ကလည်း ကုလားပါ ဘဲ။ ကုလားပြည် ကြီး မှာ မွေးဖွား ခဲ့တာပါ။
ကိုမြအေး ခင်ဗျား သည် ဗမာ မွတ်စလင် သူရဲကောင်းဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျုပ်တို့ဂုဏ်ယူ
ပါတယ်၊။ Congratulations! We salute you.
Credit Aung Gyi
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 2:59 PM No comments:
Credit U Tun Wai.
ဦးဘိုးလှိုင်သည် တစ်ခါသော် သမီး၊ နှမ စသည်တို့ကို ပေးဆက်လျက် အခွင့်အရေးယူသူ အမှုထမ်းတစ်ဦးကို မင်းတုန်းမင်းကြီးက လွန်စွာမှ မျက်နှာသာ ပေးတော်မူသည့်အတွက် မသင့်တော်ကြောင်း မင်းတုန်းမင်းကြီးအား တင်လျှောက်ခဲ့သော်လည်း မင်းတုန်းမင်းကြီးက အလေးအနက် မထားသည့်အတွက် မှူးမတ်စုံညီတို့၏ ရှေ့မှောက်၌ ...
“အစ်မ၊ နှမ၊ သမီးကကို၊ စ၍ဆက်နှင်း၊ လက်ဆောင်သွင်း၍၊ စိုးမင်းချစ်မြတ်၊ ထိုအမတ်သည်၊ အတတ်မရှိ၊သတိကင်းကွာ၊ ဘုန်းကြီးလှာမူ၊ ပြည်ရွာပျက်ကြောင်း တစ်ပါးတည်း” ဟူ၍ လျှောက်တင် လိုက်သည်။
ထိုအခါမင်းတုန်းမင်းကြီးလည်း အမျက်ပြင်းစွာ ထွက်သဖြင့် လှံကို ကောက်ကိုင်လိုက်ကာ..
“သည်လှံနှင့် ငါ့ခမည်းတော် စီရင်၍ နင့်အဖေ ယင်းတော်ဝန်ကြီး သေခဲ့သည်မဟုတ်လော။ သည်လှံနှင့် မောင်မင်းကို စီရင်ခြင်း ခံလိုသလော” ဟူ၍ မေးလိုက်သည်။ ထိုအခါ ဦးဘိုးလှိုင်သည် တုန်လှုပ်ခြင်း အလျဉ်းမရှိဘဲ
“ထိုးတော်မူပါဘုရား” ဟု ဆို၍ ရင်ဘတ်ကိုပင် ကော့ပေးလိုက်သေး၏။ မင်းတုန်းမင်းကြီးလည်း စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ကာ အတွင်းတော်သို့ ဝင်သွားသည်ဟူ၏။
ဤတွင် အခြားမှူးမတ်များက ...
“ဝန်ကြီးမင်းမှာလည်း တင်းတင်းမာမာ ရဲပဲရဲလွန်းသဗျာ” ဟူ၍ ပြောကြလေ၏။ ထိုအခါ ဦးဘိုးလှိုင်က ...
“ကျွန်ုပ်အဖို့ လှံနှင့်ထိုးသတ်ခံရ၍ သေရခြင်းက မြတ်၏။ နေရာတိုင်း မင်းလိုလိုက်၍ စီမံသော်
မကောင်းမူ ဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက် နိုင်ငံတော် ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်ရလေသည်ဟု ဤနာမည်မျိုး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါလျှင် သေကျိုးမနပ် ဖြစ်သည်။ ထိုမကောင်းသော အပုပ်နံသည် တထောင်းထောင်းနှင့် လူအပေါင်းတို့ နှာခေါင်းရှုံ့ကြမည်ကို ကြောက်စရာကောင်းသည်။ မှူးမတ်ဆိုသည့်အတိုင်း တည့်တည့်မတ်မတ် ဖြစ်အောင် စီမံခန့်ခွဲလျက် လျှောက်တင်ခွင့်ရှိက အသက်ကိုစွန့်၍ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တင်ကြရမည်။ သို့မှ မှူးမတ်နှင့်တူသည်” ဟူ၍ ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့လေသည်။
((((( ယောမင်းကြီး ဦးဘိုးလှိုင်၏ စိတ်ဓာတ်))))
၀န်ကြီးတွေ နဲ့ အာဏာပိုင်တွေဟာ ဒီအစိုးရခေတ်မှာ လူထုကို
မချင့်မချိန် ပြောဆိုတာတွေ မကြာခဏ တွေ့ရတတ်သလို ကြားရ ခံရသူအပေါင်းကလည်း ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ပြောကြ ဆိုကြရင်းနဲ့ပဲ ပြီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ လူထုကို စော်ကားမှုတွေ ထပ်မဖြစ်အောင် စုပေါင်းပြီး အရေးဆိုကြမယ်ဆိုရင် အနည်းနဲ့အများ ပို ထိရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖိုးဦးအောင်ဆန်းရဲ့ ပုံနဲ့ ဘဲမျှဝေေ၀လိုက်ပါတယ်။
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 2:54 PM No comments:
“၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အတွေး”
မလေးမောင် သည်ယနေ့ 
သွေးစက်နဲ့ကျမျက်ရည်၊ ပြည်နိုင်ငံ့အရေး
လူ့ လမ်းစဉ် လူ့ ခရီးမှာ
ဝမ်းမဝ မျှမညီ၊ ပြည်နိုင်ငံ့အရေး
စီးခဲ့တဲ့ သွေးမျက်ရည်၊ ပြည်နိုင်ငံ့အရေး
ဟံသာဝတီ စာစောင် ၄၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၉၈၄
Credit http://wanna23-23 blog
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 2:42 PM No comments: